Dhammaan wixii ku saabsan iPhone ee ku jira iPhone News | News IPhone (Bogga 3)
Apple waxay bixisaa on Cyber ​​Isniinta 2020
Waxaan ku tusineynaa dalabyada ugu fiican ee ku saabsan alaabada Apple iyo qalabyada aad ka heli karto inta lagu jiro Cyber ​​Monday 2020
Sida loo hagaajiyo dib-u-dhaca kumbuyuutarka ee iOS 14
Sida loo hagaajiyo kumbuyuutarka "lag" ee macruufka 14. Haddii aad aragto in kumbuyuutarkaaga iPhone uu gaabis yahay, iskuday xalalkan.
Apple waxay iibsatay xuquuq 'dukumiinti dhulka hoostiisa mara' 'documentary'
Apple waxay xaq u leedahay Todd Haynes oo ah dokumenti dokumenti ah oo inbadan la sugayay oo ku saabsan kooxda 'The Velvet Underground' ee Apple TV +.
Shakhsi ahaan iPhone-kaaga ugu muuji mawduucyada iyo xirmooyinka astaamaha ah [VIDEO]
Casharradan waxaan ku tusaynaa sida loo rakibo xirmooyinka astaamaha iyo mawduucyada si buuxda u qaabeynaya iPhone-kaaga, ka dhiga mid gaar ah.
Ku ilaali iPhone-kaaga kiisaska Nomad
Nomad wuxuu isku daraa maqaar leh difaac sare kiiskiisa Rugged, oo leh awood uu ku keydiyo kaararka deynta.
Mujjo, bedelka ugufiican kiiska maqaarka Apple
Mujjo wuxuu na siinayaa hal sano oo dheeri ah kiiskeeda maqaarka loogu talagalay iPhone 12 cusub, oo leh maqaar qaali ah iyo dhumucda ugu yar.
Adeegga fiidiyowga ee qulqulaya AMC + wuxuu u yimaadaa barnaamijka Apple TV sida kanaalka rukunka
Apple waxay ku darsataa kanaalka macaamiisha AMC + barnaamijka Apple TV ee Mareykanka laga sugayo soo bandhigiddiisa caalamiga ah.
Kuwani waa astaamaha 5G ee kala duwan oo aad ka heli karto baarka xaaladda iPhone-kaaga
Soo ogow astaamaha 5G ee kala duwan ee aad ka heli karto iPhone-kaaga cusub 12 iyo macnaha dhammaantood.
Aqara wuxuu bilaabaa inuu taageero laydhka la qabsiga cusub ee AppleK HomeKit
Aqara wuxuu ka horreeyaa soosaarayaasha kale adoo ku daraya taageerada HomeKit's ileyska cusub ee la qabsiga ee iOS 14.
Moshi Deep Purple, bakteeriyada UV la qaadan karo
Moshi wuxuu na siiyaa qalabka 'ultraviolet steriulizer' kaas oo aan uga tagi karno iPhone-keena iyo qalabyada kale ee jeermiska ka caagan.
Apple waxay dooneysaa inay ka tagto Qualcomm oo ay raacdo 5G
5g Shirkadda Cupertino badanaa waxay dhibaato ku qabtaa alaab-qeybiyeyaasha doonaya inay ka faa'iideystaan ​​guusha ay ...
Macaamiilkii ugu fiicnaa ee Apple ee jimcahan Madow
Waxaan u xulannaa heshiisyada ugu wanaagsan ee ku saabsan alaabada Apple iyo qalabyada loogu talagalay Amazon Black Friday ee Noofambar 27.
Sameynta iPhone 12 Pro waxay ku kacaysaa kaliya 400 euro
Wadahadalka weligiis ah ee ku saabsan in IPhone-ka uu u qalmo waxa ku kacaya, ama waxa ku kacaya, ugu yeer waxa aad rabto….
Ilaaliyaha shaashadda Spigen ee iPhone-kaaga
Waxaan ku tusineynaa mid ka mid ah kuwa ugu fiican iPhone shaashadda aad ka heli karto, sida loo rakibay iyo natiijada ugu dambeysa.
Microsoft ayaa sheegtay in macaashka ay ka helaan ciyaaraha Xbox uu ka yar yahay kan Apple ay ka heshay App Store
Microsoft ayaa sheegtay in macaashka ay ka helaan ciyaaraha Xbox uu ka yar yahay kan Apple ay ka heshay App Store. Taasi lama barbardhigi karto 200 milyan oo Xbox ah bilyan iPhones.
Wireless CarPlay wuxuu ku sii fidayaa Soosaarayaal badan oo loogu talagalay iPhone-ka Portless
Shirkadaha baabuurta sameeya ayaa ku degdegaya inay keenaan CarPlay wireless-ka gawaaridooda iyagoo wajahaya iphone-ka aan xadka laheyn 2021.
Apple ayaa bixin doonta 113 milyan si loo yareeyo iphone-ka ay ku jiraan baytariyada xumaaday
Dhibaatada batteriga IPhone-ka ayaa Apple uga baxday $ 113 milyan oo kale, marka lagu daro $ 500 milyan oo ay dhawaan bixisay
Kani waa Jimcaha Madoow ee Apple sanadkan
Apple waxay horeyba u diyaarisay jimceheeda gaarka ah ee Black Friday dhowr kaar oo hadiyadeed ah alaabteeda
iFixit wuxuu daabacaa sawirada gudaha gudaha iPhone 12 Pro Max: batteriga ku jira L iyo module kamarad cusub
Ragga jooga iFixit waxay kala furfurayaan iPhone-ka cusub ee 12 Max Max ah si ay u muujiyaan baytari cusub oo L-qaabeeya iyo module sawir cusub ah.
Soo dejiso sooyaalka gudaha iPhone 12
Mawduuca waraaqaha ayaa ku siinaya in yar oo sheekeysi ah. Waxaa jira waqti nolosha ka mid ah ...
Black Toddobaadka Jimcaha ee Black, iPad iyo Apple Watch
Waxaan u xulannaa heshiisyada ugu fiican ee ku saabsan alaabada Apple iyo qalabyada usbuuca Black Friday ee Amazon
Tani waa sida ay Intercom ula shaqeyso HomePods
Waxaan sharxeynaa sida Intercom-ka cusub ee aan ugu adeegsan karno HomePod, iPhone iyo Apple Watch loo qaabeeyey iyo sida ay u shaqeyso
Sida loo joojiyo Twitter Fleets
In kasta oo aysan suurtagal ahayn in barkinta Twitter Fleets, in la joojiyo aragtooda waxa aan sameyn karno ayaa laga aamusinayaa.
Tijaabinta Eufy 2K Pan iyo Janjeeri, kamarad aad u fiican oo qiimo weyn leh
Kaamirada eufy 2K Pan iyo Janjeeri waxay na siineysaa astaamo aad u wanaagsan qiimo aad u soo jiidasho leh waxayna la jaan qaadi kartaa VideoKi Secure Video ah
Feejignaanta soo jeedinta Black Friday ee Apple Watch Series 5 ee Amazon
Feejignaanta soo jeedinta Black Friday ee Apple Watch Series 5 ee Amazon. Waxaad haysataa 5mm Apple Watch Series 40 LTE. qiimaha qosolka.
Kiiska maqaarka buuxa ee Apple ee iPhone 12 hadda waa la heli karaa
Apple waxay si rasmi ah u soo saartay kiiska cusub ee maqaarka ama maqaar gacmeedka loogu talagalay iPhone 12 cusub oo qiimihiisu yahay 149 euro.
MacX Video Converter Pro, wax ka bedel oo ku beddel fiidiyowyada leh tayo 4K ah
Haddii aad raadineyso codsi aad kula shaqeyso faylasha 4K, MacX Video Converter Pro waxay u badan tahay inay dabooli doonto baahiyahaaga.
Kaamirada amniga ee Eufy waxay u shaqeysaa Black Friday
Eufy wuxuu bilaabmaa usbuuca Jimcaha Madoow iyadoo dalabyo xiiso leh laga helo kamaradaha amniga gudaha iyo dibadda.
Abuuraha barnaamijka Halide sawir wuxuu falanqeeyaa kamaradda iPhone 12 Pro Max
Abuuraha barnaamijka Halide sawir wuxuu falanqeeyaa kamaradda iPhone 12 Pro Max. Waad la dhacday shucuurta cusub.
Dib-u-eegista HomePod Mini: waa yar tahay laakiin xoog sheegasho
Waxaan dib u eegis ku sameynay afhayeenka cusub ee Apple, wax yar oo layaableh waa € 99, ​​waxaana kujira xeedho sanduuqa kujira.
MagSafe Duo uma ogolaado iPhone inay ku soo dallacaan 15W
Xeedho MagSafe Duo awood uma leh inuu ku dallaco iPhone-ka 15W oo leh xeedho 20W ah. Haddii aan rabno awood dheeri ah, waa inaan soo iibsanno xeedho kale.
Labaad Beta ee macruufka iyo iPadOS 14.3 Soosaarayaasha
Apple wuxuu sii daayaa beta 2 nooca iOS 14.3 iyo iPadOS 14.3 kuwa horumariya. Noocyo beta cusub si loo hagaajiyo amniga iyo xasilloonida
Beats Oo Bilaabay Iftiiminta-U-Madoobaadka Ambeerka Powerbeats
Beats wuxuu soo bandhigayaa Ambush Powerbeats oo ka dhex ifaya mugdiga. Iyagu waa isla Powerbeats aad horeyba u taqaannay, midab cagaaran oo midab leh.
Cashar: Sida Looga Dhoofiyo Sawiradaada Sawirada Google ilaa iCloud
Sawirada Google waxay soo gabagabeynayaan adeegooda keydinta aan xadidneyn sanadka 2021. Waxaan ku bareynaa sida loogu wareejiyo maktabada sawirkaaga iCloud si fudud.
Foxconn ayaa la sheegay inay tijaabisay iphone la laaban karo iyadoo la fiirinayo in la soo saaro Sebtember 2022
Suurtagalnimada soo saarista iPhone-ka laabmaya bisha Sebtember 2022 waa la sifeeyey, Foxconn horey ayey u tijaabin lahayd.
Sida loo duubo fiidiyowga Dolby Vision HDR ee leh iPhone 12
Waxaan ku tusineynaa sida aad ugu habeyn karto HDR Dolby Vision duubista fiidiyowgaaga iPhone 12 habka ugu fudud.
Eve waxay ku dareysaa taageerada shabakadaha cusub ee 'Thread' qalabkeeda HomeKit
Eve waxay cusbooneysiisaa qalabkeeda si ay u taageerto shabakadaha cusub ee otomaatiga guryaha ee Thread oo u oggolaanaya nabadgelyo badan gurigayaga.
IOS-da cusub ee cusub ee loo yaqaan 'iOS 14.3' waxay keeneysaa ProRAW cusub, iyo taageerada koontaroolaha cusub ee PS5
Apple ayaa sii daayay macruufka cusub ee 14.3 Beta 1 shalay iyada oo lagu daray taageerada koodhka cusub marka lagu daro taageerada xakamaynta ciyaarta fiidiyowga.
IOS 14.3 beta wuxuu muujinayaa naqshadeynta AirPods Studio ee astaanta
Qalabka iOS 14.3 beta wuxuu noo keenay daadad cusub oo ku saabsan Studio-ga soo socda ee AirPods ee ay Apple diyaarinayso. Naqshadeeda ayaa la kashifay.
Eve Degree, oo ah saldhig cimilo oo yar-yar oo loogu talagalay HomeKit
Waxaan falanqeynay xarunta cimilada Eve Degree, oo la jaanqaadi karta HomeKit iyo macluumaadka ku saabsan heerkulka, huurka iyo cadaadiska.
Ma soo kaban kartaa faylal si kadis ah loo tirtiray oo ku saabsan iOS?
Haddii aad file ka tirtirtay iPhone-kaaga, dhammaantood ma lumayaan haddii aad raacdo talooyinka aan kugu tusno qodobkan.
Midowga Yurub wuxuu bilaabayaa inuu booliska ku tababaro sida loo jabsado iphone
Abuuritaanka suuragalka ah ee Midowga Yurub ayaa sir ah si ay uga caawiso saraakiisha bilayska inay jabsadaan taleefannada iPhone ee muwaadiniinta.
Apple wuxuu dhaqaajiyaa siyaasadiisa soo celinta ololaha Kirismaska
Apple waxay dhaqaajineysaa ololaheeda soo celinta maanta illaa iyo 6-da Janaayo si loo fududeeyo soo celinta iibsashada
Nabadgelyo Intel, Apple waxay soo bandhigaysaa Mac-keedii ugu horreeyay oo ay ku shaqeyso processor-keeda
Apple waxay soo bandhigtay kumbuyuutaradeeda cusub processor-ka M1, iyadoo horumar weyn laga sameeyay dhanka awooda iyo ismaamulka.
Apple Music waxay soosaaraysaa liisaska liistada cusub si aan u ogaanno muusigga fayraska ugu badan
Apple wuxuu soo bandhigayaa liisaska liistada cusub ee Apple Music kaas oo loogu raaxeysto wax ku dhufashada fayraska ama nasasho maskaxeed oo aan ku siino liistada 'Do not Disturb playlist'.
Sida loo daawado dhacdada Apple Silicon ee "Hal shay kale" galabta
Sida loo daawado dhacdada Apple Silicon ee "Hal shay kale" galabta. Apple waxay ku siineysaa dhowr wadiiqooyin kala duwan oo toos looga baahinayo.
Dukaammada Apple way xidhan yihiin, "Hal shay oo dheeri ah" Kusoo Dhaweynta Dhacdada
Dukaanka khadka tooska ah ee Apple ayaa horeyba loo xiray iyadoo la sugayo dhamaadka galabta dhacdada la xiriirta Mac
Magsafe Dual Charger Wuxuu Helay Ansixin FCC
Mashiinka laba-geesoodka ah ee 'Magsafe Charger' wuxuu oggolaansho ka helaa FCC-da Mareykanka sidaa darteed way ku dhowdahay in la billaabo.
Hadda waxaan u xafidi karnaa kiisaska Laba-iyo-tobanka Koonfurta BookBook ee iPhone 12 Mini iyo Pro Max
Furitaanka boos celinta ee iPhone 12 Mini iyo iPhone 12 Pro Max, Laba iyo toban South wuxuu u furayaa boos celinta kiiska BookBook ee kuwan.
Apple waxaa ku jira sawirro sumadda MagSafe oo ku saabsan kiisaska maqaarka rasmiga ah
Apple waxay ku dartay sawirro cusub dukaanka Apple ee astaanta taas oo ka tagi doonta xeedho MagSafe kiisaska rasmiga ah ee ay leedahay muddo kadib.
iPhone 12 Pro VS Huawei P40 Pro, waxaan wajahnay kamaradeeda
Waxaan kuu soo qaadaneynaa isbarbardhiga kamaradaha u dhexeeya iPhone 12 Pro iyo mid ka mid ah boosteejooyinka ugu fiican ee qaybta sawirada, Huawei P40 Pro.
Dib u eegid: VOCOlinc PureFlow, ku neefso hawo nadiif ah guriga adoo wata HomeKit
Waxaan tijaabinay Sifeeyaha Hawada ee VOCOlinc PureFlow, HomeKit oo la jaan qaadaya iyo laba shaandhe oo HEPA ah si aan uga saarno 99,97% waxyaabaha qashinka kujira.
Fiidiyowgii ugu horreeyay ee xeedho MagSafe Duo ah
In kasta oo ay jiraan cillado dhowr ah, sida qiimaheeda sarreeya, ayaa xeedho cusub oo MagSafe Duo ah waxay muuqaal aad u wanaagsan ku reebtay fiidiyowga
Sida loo furo booska WhatsApp oo leh maareeyahaaga cusub
Waxaan ku tusineynaa sida aad uga saari karto WhatsApp waxyaabaha aan loo baahnayn oo aad si fudud ugu bannayn karto barnaamijka
Cabirro isku mid ah oo loogu talagalay iPhone 13 oo leh horumarin xagga xagasha ah 'Ultra Wide Angle'
IPhone 13 ee soo socda ayaa horumarin ku sameyn doona kaamerada iyo cabirrada shaashadda la mid ah moodooyinka sannadkan.
Qaar ka mid ah fiilooyinka fiilooyinka wireless Qi lacag kama qaadi doonaan iPhone 12
Qaar ka mid ah fiilooyinka wireless-ka Qi lacag kama qaadaan iPhone 12. magnets-ka uu iPhone 12 ku dhejiyo MagSafe waxay u badan tahay inuu eedda leeyahay.
Apple Pay waxaa loo isticmaalaa in kabadan 500 milyan oo iphone
Tikniyoolajiyadda lacag-bixinta ee wireless-ka ah ee Apple ayaa hadda laga heli karaa in ka badan 500 milyan oo iphone adduunka oo dhan
Kuwani waa wararka ku saabsan macruufka cusub ee 14.2
Wargeysyo cusub, emoji cusub, fursado cusub oo loogu talagalay dareeraha LiDAR ee iPhone 12 Pro oo ka mid ah waxyaabaha cusub ee iOS 14.2.
Sawir la sheegay inuu yahay naqshadda cusub ee daadinta AirPods 3
Xanta ku saabsan cusbooneysiinta AirPods waxay umuuqataa inay xoog ku sii qaadaneyso daadinta sawirada cusub. Waan ku tusaynaa adiga.
Kaydso 25% iyo 10% dheeri ah oo ku saabsan sameecadaha dhagaha ee Sudio
Sudio wuxuu na siiyaa qiimo dhimis 25% ah taleefannadooda True Wireless iyadoo 10% dheeraad ah la isticmaalayo lambarka aan kuu soo bandhigno.
Sida loo badbaadiyo batteriga iPhone 12 iyo 12 Pro
Qaab fudud oo batari loogu keydin karo iPhone 12-ka cusub ee ay soo bandhigtay Apple ayaa ah in la joojiyo isku xirka 5G-ga. Waxaan ku tusaynaa sida loo sameeyo
Xeedho MagSafe wuxuu ku koobnaan doonaa 12W gudaha iPhone 12 Mini
Mid ka mid ah waxyaabaha ugub ku ah dhacdadii ugu dambeysay ee Apple, Chargers MagSafe, ayaa u shaqeyn doona si ka duwan waxay kuxirantahay qaabka iPhone 12. Waan kuu sheegi doonaa taas.
Hadda waa suurtagal in laga dhageysto muusikada Spotify Apple Watch iyada oo aan loo baahnayn iPhone
Spotify horeyba waxay u ogolaaneysaa suurtagalnimada dhageysiga muusikada si toos ah uga socota Apple Watch iyada oo aan loo baahnayn iPhone.
John Turturro iyo Christopher Walken si ay ugu tuuraan Severance Apple TV +
Taxanaha cusub ee ka soo muuqan doona Apple TV + oo loo baabtiisay sida Severance, waxaa jilaya Christopher Walken iyo John Turturro
Nooca xiga ee WhatsApp waxaad si wanaagsan ugu maamuli doontaa keydinta
Nooca xiga ee WhatsApp waxaad si wanaagsan ugu maamuli doontaa keydinta. Waxaad awoodi doontaa inaad sifiican u maamusho sawirada iyo fiidiyowyada aad uruuriso.
Cajaladda Apple ee MagSafe Duo ayaa ku dhow in la bilaabo
Waxaan ku dhowaan karnaa bilaabida qalabkan cusub ee cusub ee loo yaqaan 'MagSafe Duo' oo taasi hadda ma muuqato meel kasta
Dukaammada Apple ee UK ayaa xirnaan doona muddo afar toddobaad ah
Dukaammada Apple ee ku yaal Boqortooyada Midowday ee Ingiriiska ayaa xirnaan doona muddo afar toddobaad oo dheeri ah sababo la xiriira cudurka faafa ee COVID-19
Mophie wuxuu dib u naqshadeeyay batariga Casiirka Cunnada si uu u noqdo mid caalami ah
Mophie ayaa kadis ku ah sameynta baytari dibadeed oo cusub, Casiirka Casiirka, kaas oo ku lifaaqan iPhone-keena iyadoo loo marayo kiis gaar ah.
MagSafe wuxuu la shaqeeyaa 20W PD xeedho, oo kaliya maahan Apple
Apple si xatooyo ah ugama xadidin xeedho MagSafe xeedho ay noogu iibinayso bakhaarkeeda, waxaan kuu sheegaynaa faahfaahinta.
iPhone 12 Pro, dib u eegis kadib toddobaad la isticmaalo
Dib-u-eegista saxda ah ee iPhone 12 Pro oo leh baaritaan kamarad qoto dheer ayaa halkan taal, ha moogaanin oo soo hel iPhone-ka cusub.
Mujjo waxay soo saareysaa kiisaska maqaarka ee casriga ah ee dhammaan iPhone 12
Mujjo waxay soo saareysaa kiisaskeeda cusub ee maqaarka ee dhamaan iPhone 12 kala duwan oo laba moodal ah iyo afar midab oo kala duwan oo dunida oo dhan lagu daabulo.
Apple wuxuu bilaabay barnaamijka beddelka ee AirPods Pro oo leh arrimaha codka
Apple waxay bilowday barnaamij bedel ah oo loogu talagalay AirPods Pro oo leh dhibaatooyin xagga codka ah kadib markay hubiyaan.
Apple ayaa soo saartay Apple One oo leh qorshooyin ka raqiisan halka Spotify ay ka digeyso kor u kaca qiimaha
Ka dib hoos u dhac ku yimid faa'iidooyinka Spotify ka dib markii ay kordheen macaamiisha Apple Music, Spotify ayaa ka fiirsaneysa kororka qiimaha ...
Apple One hadda waa la heli karaa. Waa maxay intee badbaadin kartaa?
Xirmada adeegga Apple One ee isu keena Apple TV +, Apple Arcade, Apple Music iyo iCloud ayaa hadda la heli karaa si loo shaqaaleeyo
Apple waxay bilaabi kartaa inay ku iibiso iPhone-ka 1TB oo kayd ah
Kadib markii la kordhiyay awooda wax soo saarka ee iPhone 12 Pro ilaa 128GB, xanta cusub waxay soo jeedineysaa inaan dhowaan yeelan karno iPhone 1TB.
Apple waxay iibineysaa iPhone 12 Pro ka badan intaan ku iibsaday
Apple waxay umuuqataa inay layaab ku noqotay dalabkii xooganaa ee iPhone 12 Pro ay heshay oo boos celintu sii kordhayaan.
Sida loo dhigo iPhone 12-kaaga qaabka DFU iyo xeelado badan oo qabow
Waxaan dooneynaa inaan ku barinno qaar ka mid ah tabahaaga cusub ee iPhone 12, waxaad ku dhaqaajin kartaa qaabka DFU iyo Xaaladda Soo-kabashada si fudud tilmaamahan.
Waxaan ku tijaabinay shaashadda ilaaliyaha Apple Watch Spigen PRO FLEX EZ FIT
Waxaan ku tuseynaa habka rakibaadda shaashadda iyo sidoo kale natiijada ugu dambeysa. Ilaalin fudud oo aad u jaban.
New Insta360 ONE X2, kamaradda ugu fiican 360 ayaa lagu cusbooneysiiyaa shaashad cusub iyo iska caabin biyo ah
Insta360 waxay soosaaraysaa Insta360 ONE X2 cusub, kamarada ugu fiican 360 video hada shaashad leh iyo biyo aan laheyn guryo dheeri ah.
Shaashado isku laaban oo adag ayaa ah rukhsadda cusub ee Apple
Apple wuxuu leeyahay shati cusub oo diiwaangashan oo ku saabsan burburka iyo xoqida xoqida u adkaysata bandhigyada isku laaban
Podcast 12 × 06: Aynu ka hadalno xeedho
Toddobaadkan waxaa la joogaa xilligii laga hadli lahaa wax ku saabsan xeedho. Xadhig la’aan ama fiilooyin? Si dhakhso ah ama gaabis ah? Dhammaan shakiga, ku jira Podcast-kan
Shukaansi video Virtual rasmi rasmi ah u yimaado in Tinder
Tinder, barnaamijka shukaansi par heer sare, ayaa hadda ka shaqeysiisay isku xirnaanta fiidiyowga Face to Face si aan u helno taariikho dalban oo looga fogaado Covid ..
Haddii ay jiraan shakiyo: saldhigga AirPower wuu dhintay
Mashruuca saldhigga AirPower iyo dhammaan tijaabooyinka waa la joojiyay imaatinka saldhigga cusub ee MagSafe
Soo dejiso sawir-gacmeedka hore ee iPhone-ka ee loogu talagalay moodooyinka cusub
Ku soo dejiso waraaqaha sawirada ee na weheliyay dhammaan iPhone-yada kala duwan iyo noocyada kala duwan ee macruufka ee iPhone-kaaga cusub ee 12.
In ka badan 2.000 oo saldhigyada booliiska Mareykanka ah ayaa leh qalab lagu furo iPhone-ka
In ka badan 2.000 oo saldhigyada booliiska Mareykanka ah ayaa leh qalab lagu furo iPhone-ka. Guul badan ama ka yar, waxay isku dayaan inay galaan mobilada la xiray.
iFixit waxay horey u duubtay iPhone 12 cusub iyo iPhone 12 Pro
iFixit wuxuu horey u shaaciyay gudaha iPhone 12 cusub iyo iPhone 12 Pro cusub wuxuuna qaatay fursad uu ku qiimeeyo dib u hagaajintooda.
Sida loo cabiro dhererka qof ee skaanka LiDAR ee iphone iyo ipad
IPad-ka cusub ee Pro iyo iPhone 12 waxay wataan qalabka 'LiDAR' oo awood u leh inuu sameeyo waxqabadyo sida cabirka qof, ma taqaanaa sida?
Charger-ka cusub ee MagSafe wuxuu laba jibbaar ka yar yahay xeedho xarkaha
Apple waxay soo saartay MagSafe, fiilada xarkaha Apple ee cusub, oo ay weheliso iphone-yada cusub, laakiin ma u qalantaa? Ma xeedho dhakhso leh baa?
Kuwa ugu fiican ee USB-C wax ku iibiya oo aad ka iibsan karto iPhone 12
Kuwani waa bedelka ugu fiican ee xeedho-sameeyaha USB-C ee Apple si ay u awoodaan inay kugu soo oogaan iPhone-kaaga cusub 12, ama wixii aad rabto.
Apple TV + waxaa lagu sameyn karaa 'Waqti looma dhinto', filimka cusub ee James Bond
Xanta ayaa socota in Apple TV + uu ku dhow yahay inuu helo xuquuqda No Time to Die, filimkii ugu dambeeyay ee James Bond.
Sida loo xaliyo dhibaatooyinka qallooca ee AirPods iyo AirPods Pro
Waxaan kuu sheegeynaa sida loo xalliyo dhibaatooyinka qallooca ee ku jira AirPods-kaaga iyo AirPods Pro adigoon aadin adeegga farsamada ee Apple.
Filimka cusub ee 'Bride' ee Scarlett Johansson ayaa imanaya Apple TV +
A24 iyo Apple waxay xaqiijinayaan in filimka xiga ee Bride ee Scarlett Johansson uu ku dhici doono buugga Apple TV +.
iPhone 12 Pro: Runtii ma mudan tahay? Feejignaanta iyo dareenka ugu horreeya
Nagala soo baar iPhone-kan cusub ee 12 XNUMX Pro, qaabkiisa cajiibka ah iyo dhammaan qaababkiisa cusub.
Badhanka Eve, badhan lagu xakameeyo HomeKit
Eve Button waxaan ku fulin karnaa seddex ficil oo kala duwan oo xakameynaya qalabkeena iyo jawiga HomeKit
IPhone 12 ayaa garaaci doona 5G xitaa haddii aadan isticmaalin
IPhone 12 wuxuu tilmaamayaa 5G xitaa haddii aad kuxirantahay shabakad xawaare hoose kujirta qeybta kore, maxaad u maleyneysaa cabirkan?
Kiisaska MagSafe ee iPhone 12 cusub ayaa bilaabaya inay yimaadaan qaarna cilladaysan yihiin
Iibsadayaasha iPhone 12-ka cusub waxay bilaabayaan inay helaan qalabkooda sida kiisaska Magsafe oo qaarkood ay imanayaan iyagoo cilladaysan.
Isticmaalaha 'L0vetodream' wuxuu saadaalinayaa inaan yeelan doonno laba cabbir oo ah AirTags
Isticmaalaha caanka ah ee Twitter-ka L0vetodream wuxuu saadaalinayaa inaan dhowaan yeelan doono AirTags cusub oo laba nooc oo kala duwan ah.
Chargers-yada cusub ee MagSafe ayaa imanaya, kahor iPhone-ka
Kaydka cusub ee Apple ee 'MagSafe' iyo qalabka la jaanqaadi kara ayaa durbaba soo gaadhaya dadka isticmaala, muddo dheer ka hor iPhone-kooda la jaan qaada.
Halkan ku soo dejiso waraaqaha sawir-gacmeedka ah ee ay Apple u sameysay iPhone 12 cusub
Apple waxay u diyaarisay waraaqo cusub oo iPhone ah 12. Si kastaba ha noqotee, kama dhigayso inay heli karaan dadka isticmaala. Laakiin halkan waad kala soo bixi kartaa iyaga.
Fikradda Abuuraha waxay na tusaysaa fiidiyoow fikrad ah oo ah AirTags
Waxaan wadaagnaa fikrad ah waxa AirTags abuuri karaya Fikradda Abuuraha
Kuo wuxuu qirayaa in baahida loo qabo iPhone 12 Pro ay dhaaftay filashooyinka
Kuo wuxuu qirayaa in baahida loo qabo iPhone 12 Pro ay dhaaftay filashooyinka. Tirooyinka amarka koowaad, iPhone 12 Pro wuxuu ka fiicnaanayaa iPhone 12.
Apple waxay ku soo bandhigi kartaa Mac cusub Apple Silicon bisha Nofeembar 17
Prosser wuxuu ku shaaciyay bartiisa Twitter-ka in Nofeembar 17 ay noqon karto furaha ugu dambeeya ee sanadka ee Mac cusub ee Apple Silicon.
Ilo lagu kalsoonaan karo ayaa sheeganaya in Aqoonsiga Taabashada uu ku noqon karo iPhone-ka shaashadda hoosteeda
Xanta ugu dambeysa ee la xiriirta hirgelinta Aqoonsiga Taabashada ee IPhone-ka, waxay soo jeedineysaa inay run noqon karto dhowaan.
Sida loo abuuro tuubbooyin otomaatik ah Apple Watch-kaaga
Ma rabtaa in wejigaaga Apple Watch uu keligiis isbeddelo? Mise in habka aamusnaanta la hawlgeliyo markaad seexanayso? Waan sharaxeynaa sida.
Kuwani waa qalabyada cusub ee 'MagSafe' ee ku habboon iPhone 12
Apple waxay soo bandhigtay iPhone 12 cusub oo ay weheliso qalabka 'MagSafe': kiisaska iyo boorsooyinka si shaqsiyan looga dhigo terminal-ka.
Belkin wuxuu soo bandhigayaa qalabkiisa cusub ee loogu talagalay iPhone 12 isagoo ka faa'iideysanaya MagSafe cusub
Belkin wuxuu soo bandhigayaa soo-jeedintiisa si looga faa'iideysto MagSafe-ka cusub ee iPhone 12 oo leh saldhigyo lacag-bixineed iyo kuwa baabuurta haysta.
Spotify ugu dambeyntii waxay soo bandhigeysaa wijigeeda shaashadda guriga ee iOS 14
Spotify ayaa cusbooneysiisay codsigeeda ugu dambeyntii si rasmi ah ugu biirisay qalabkeeda loogu talagalay shaashadda guriga ee iOS 14.
Xeedho cusub oo aan xadhig lahayn oo MagSafe ah ayaa gaadhsiisa illaa 15W lacag
Waxaan dib u eegnay astaamaha fiilooyinka xarkaha wireless-ka ee MagSafe ee Apple laba jeer ka xoog badan heerka Qi.
IPhone 11, SE iyo XR sidoo kale kuma jiri doonaan adabtarada wax ku shubta wixii hadda ka dambeeya
IPhone-ka cusub ee cusub ee loo yaqaan 'iPhone 12' malahan adabtarada amraya ama EarPods gudaha sida iPhone 11, XR iyo SE oo wali la iibinayo.
Apple waxay si rasmi ah u bilawday macruufka 14.1 iyo iPadOS 14.1
Apple ayaa soo bandhigtay kadib soo bandhigida aaladaha cusub noocyada iOS 14.1 iyo iPadOS 14.1 ee iPhone iyo iPad.
Apple wuxuu dib u soo nooleeyaa MagSafe sida qalab loogu talagalay iPhone 12
Apple waxay soo ceshatay astaanta MagSafe, laakiin halkii ay ka soo kaban lahayd Macs, sidii markii hore ahayd, waxay ku sameysaa ...
Iibka Maalinta Koowaad ee Kaamirooyinka Amniga ee Eufy
Eufy wuxuu na siiyaa laba kamaradood oo amni oo leh qiime aad u culus oo ka faa'iideysanaya dalabyada Maalinta Amazon Prime Day
Xeedho magnet ah oo loogu talagalay iPhone 12 ayaa u muuqata
MPOW waxay soo bandhigeysaa xeedho cusub oo magnet ah oo la jaan qaadaya iPhoen 12 saacado gudahood markay Apple soo bandhigayso taleefankeeda cusub.
Spotify wuxuu siiyaa tuubada horumaro kuwa sii haya u wareejinta liistada adeegyada kale
Spotify wuxuu u hanjabayaa horumariyeyaasha kuwaas oo wali u oggolaanaya wareejinta liisaska u dhexeeya adeegyada inay ka noqdaan marin u helka API-kooda.
Qiimo-dhimis ku saabsan alaabada Apple maalinta Amazon Prime Day
Ra'isulwasaaraha Amazon oo in badan la sugayay ayaa halkan la jooga kumanaan qiimo dhimis ah, waxaan soo xulnay kan ugu fiican alaabada Apple
Waxyaabaha UGREEN ee maalinta Amazon Prime Day
Waxaan kuu soo xulaynaa dalabyada UGREEN ee ugu fiican ee ku saabsan qalabkaaga iPhone, iPad iyo Mac inta lagu jiro maalinta Amazon Prime Day.
Apple wuxuu ka saarayaa bogga Beats 24 saacadood gudahood dhacdadii iPhone 12
24 saacadood gudahood dhacdada soo bandhigista Apple, shirkadda ayaa ka saartay bogga Beats bogga Apple.
UGREEN USB-C 65W xeedho, ka qaado dhammaan qalabkaaga xeedho yar
UGREEN waxay na siisaa xeedho ilaa 65W leh saddex dekedood oo USB-C Power Delivery ah iyo deked kale oo USB-A ah oo loogu talagalay dhammaan qalabkaaga.
Sida loo qeexo ereyada ku jira barnaamijka 'Translate' ee iOS 14
IOS 14 waxaa kujira barnaamijka tarjumaada oo waliba u ogolaanaya qeexitaanka ereyada la turjumay ee afkeena.
Sida loo demiyo qalabka otomaatiga ah ee loogu beddelo AirPods
Sida aan u hawlgalin karno ama u dhaqaajin karno isbeddelka ku xirnaanta aaladaha AirPods-keena
Sida loo dhigo astaamaha cusub ee cusub ee 'Instagram' iPhone-kaaga
Tani waa shaqeynta inbadan oo idinka mid ah aadan aqoon laakiin in Apple uu ogolaanayay in mudo ah. Codsiyada iyo ...
Tabaha lagu hagaajinayo nolosha batteriga ee iOS 14
Waxaan ku baraynaa sida loo kordhiyo ismaamulka iPhone-keena si fudud oo dhaqso leh talooyinkan fudud.
Tani waa sida iPhone ay uga soo baxday 1 illaa 11
Tan iyo markii la soo saaray iPhone-kii ugu horreeyay 2007, Apple wuxuu bilaabay sanadihii xigay, jiil cusub oo iPhone ah, ...
Laba ficil oo deg deg ah si aad u dhaqaajiso kamaradda iPhone-kaaga
Waxaan udhaqaajin karnaa kamarada iphone-ka isla markiiba isla markaana maanta waxaan ku tusineynaa sida aad u sameyn karto
"Warqad adiga", Apple TV-ga soo socda + dokumenteriga ku saabsan Bruce Springsteen albumkiisa cusub
Apple TV-ga cusub ee loo yaqaan '' documentary 'wuxuu xambaarsan yahay cinwaanka albumka soo socda ee Bruce Springsteen' 'Warqad Adiga,' oo la sii deyn doono Oktoobar 23-keeda.
Apple wuxuu caddeeyay: Aqoonsiga Face-ka kuma shaqeyn karo maaskaro
Apple waxay cadeyneysaa in aqoonsiga wajiga uusan la shaqeyn karin maaskaro hadii aan rabno amniga iPhone-keena.
Tani waa sida iOS hurdo hurdo u shaqeeyo
Waxaan sharxeynaa sababta hurdada hurdadu ay muhiim u tahay, sida loo qaabeeyey iyo macnaha cabbiraadaha ay qaadaneyso
Waxaan tijaabinay nalalka casriga ah ee VOCOlinc ee la jaan qaadi kara HomeKit
Waxaan tijaabinay guluubka Vocolinc LED iyo xargaha, oo la jaan qaadaya HomeKit iyo fursado badan oo aad uga faa'iideysan karto.
Apple wuxuu rukhsad u siinayaa shaashadda iPhone-ka ah ee isku laaban oo is-hagaajinaysa
Apple wuxuu rukhsad u siinayaa shaashadda iPhone-ka ah ee isku laaban oo is-hagaajinaysa. Lakabka dusha sare ayaa "jilcinaya" kuleylka.
PhotoTwins, tirtir sawirro nuqul ah oo bilaash ku sii daa iPhone iyo iCloud
PhotoTwins waa codsi aad u fudud oo aad ku fasaxi karto booska iPhone-kaaga iyo iCloud adoo tirtiraya sawirro nuqul ah.
Sida looga hortago in AirPod-yadaadu si toos ah qalabka u beddelaan
Sida looga hortago in AirPod-yadaadu si toos ah qalabka u beddelaan. IOS 14, xiriirka ka dhexeeya aaladaha ayaa otomatig ah, laakiin waa la naafoobi karaa.
IOS 14.2 waxay soo jeedinaysaa in Apple ku dari doonin EarPods sanduuqa iPhone 12
Nidaamka 'iOS 14.2', waxaa laga akhrisan karaa in EarPods aan lagu dari doonin jiilka xiga ee iPhone 12.
Miyuu yahay Amazon Fire TV Cube Competition ee Apple TV?
Aynu jaleecno labada aaladood oo aan ka fikirno haddii Amazon Fire TV Cube uu run ahaantii tartan u noqon karo Apple TV 4K.
Sonos iyo Disney waxay wada shaqeeyaan si kor loogu qaado xilliga Mandalorian XNUMX
Sonos wuxuu la shaqeynayaa Disney + si kor loogu qaado xilli ciyaareedka labaad ee Mandalorian iyada oo la dhiirrigelinayo bilooyin bilaash ah adeegga Disney +.
Xarkaha xusuusta ee Ciyaaraha Olambikada weligood lama qaban
Xog la helay, shirkadda Cupertino waxay diyaarisay suumano cusub oo lagu xusuusto ciyaarihii Olimbikada Tokyo.
Powerbeats Pro waxay bilaabeysaa inay hesho taageerada isku bedelka otomaatiga ah ee udhaxeeya iPhone iyo iPad
Hawsha u oggolaanaysa in codka si otomaatig ah loogu beddelo iPhone iyo iPad, ayaa laga helay Powerbeats Pro
Falanqaynta Nanoleaf Hexagons light light
Nalalka guriga ayaa muddo dheer joojiyay inay noqdaan nalalka si ay u noqdaan xubno qurxin leh oo beddelaya ...
Amazon waxay cusbooneysiineysaa kala duwanaanta Echo iyada oo qaab cusub loo soo bandhigayo waxayna soo bandhigeysaa laba TV oo cusub oo Fire ah
Amazon waxay dib u cusbooneysiisay kala duwanaanta Echo ku hadla iyadoo naqshad cusub loo sameeyay oo lagu daro soo bandhigida laba TV oo cusub oo Fire ah.
Apple wuxuu ammaanayaa wanaagga keydkiisa App: horumarka, amniga iyo kalsoonida
Apple wuxuu ammaanayaa wanaagga keydkiisa App: horumarka, amniga iyo kalsoonida. Websaydhka App Store wuxuu muujinayaa shaqada ku lugta leh xakamaynta waxyaabaha ku jira dukaanka.
Apple Watch Taxanaha 6 (PRODUCT) RED, sanduuq la'aan iyo dareenkii ugu horreeyay
Waxaan ku tijaabinay Apple Watch Series 6 cusub midabkiisa casaanka cusub waxaan kuu sheegeynaa wararkiisa ugu muhiimsan iyo dareenka ugu horeeya.
Kuwani waa 217 Emojis cusub oo imaan doona sanadka soo socda
Kuwani waa 217 Emojis cusub oo imaan doona sanadka soo socda. Xirmada waxaa lagu soo dalacay Emojis 13.1, waxaanna ku arki doonnaa iOS 14 2021.
Sida Loo Habeeyo Icons 14 Icons iyo Widgets
Astaamo cusub ayaa soo baxay, hadda waa suurtagal in la habeeyo astaamaha oo la abuuro Widgets-kaaga adiga kuu gaar ah ee iOS 14 habka ugu fudud.
Istuudiyaha 'AirPods Studio' wuxuu adeegsan doonaa guntinta U1 si uu u ogaado booska dhagaha
Tweet-kii ugu dambeeyay ee laga soo saaray L0vetodream, wuxuu sheegayaa in barnaamijka 'AirPods Studio' ee la filayo uu maamuli doono 'U1 chip' si loo go'aamiyo isticmaalkooda.
Sawirkii ugu horreeyay ee dhabta ah ee Studio-ka AirPods waa la sifeeyey
Waxaan ka hadalnay dhowr bilood wax ku saabsan noocyo badan oo sameecadaha dhagaha ah oo Apple ay ku shaqeyneyso, nooc cusub oo aan ...
Sida loo soo celiyo iPhone-kaaga sida cusub oo kale iyadoo aan waxba lagaa lumin
Waxaan kuu sharraxeynaa sida loo qaabeeyo iPhone-ka mid cusub iyada oo aan lumin wax kasta oo ku kaydsanaa iCloud, oo ay ku jiraan WhatsApp
Miyaad dhageysatay heesaha HD? Iskuday si bilaash ah 90 maalmood
Amazon waxay bilaabeysaa inay bixiso muusikada HD si loo wanaajiyo tayada adeegga qulqulka. Waxay u egtahay mid wanaagsan? Waxaad isku dayi kartaa bilaash
Dukaanka khadka tooska ah ee Apple hadda waa xiran yahay!
Wiishka qadka tooska ah ayaa hada xiran. Apple waxay bilaabeysaa diyaar garowga muhiimada maanta
Raac bandhigga Apple toos ula soco Actualidad iPhone
Toos ula soco soo bandhigida Apple Watch cusub, iPad Air iyo AirTag cusub, oo lagu faalleeyay Isbaanishka kana qayb qaadanaya sheekada.
Muuqaalka dhabta ah ee AirTags, sida uu sheegayo Prosser
Muuqaalka dhabta ah ee AirTags, sida uu sheegayo Prosser. Iyada oo leh badhan dhexe oo weyn oo ku yaal mid ka mid ah wejiyada in ku dhow dhow dusha oo dhan.
Midabyo cusub iyo xukun degdeg ah oo loogu talagalay Apple Watch Series 6
Waxay u dusisay labada isbedel ee weyn Apple Watch Series 6, oo la imaan doona taageero si deg deg ah lacag loogu bixiyo iyo midabyo cusub.
Tabaha cusub ee aad rabto inaad ogaato kahor imaatinka macruufka 14
Waxaan dooneynaa inaan ku tusino sida loo badalo biraawsarka aasaasiga ah ee iOS 14 iyo tabaha kale ee ay tahay inaad ogaato ka hor inta aysan si rasmi ah u bilaabin.
Sida wax loogu qoro fiidiyoow ama sawir leh Digital Touch si aad ugu dirto Farriimaha
Sideed ugu diri kartaa fiidiyoow ama sawir sawir shaqsiyeed ama qoraal lagu sameeyay Digital Touch oo laga soo diray farriimaha
Apple si uu u joojiyo Fortnite "Ku soo gal Apple" Sebtember 11
Shaqeynta u oggolaaneysa marin u helka Fortnite oo leh astaamahayaga Apple ID, oo mar dambe lama heli doono illaa Sebtember 11
Tile wuxuu bilaabaa caymiska ilaalinta ilaa $ 1000 magdhawga hantida lumay
Ragga ku jira Tile waxay bilaabaan caymiska si wax kasta oo aan ku qaadno aaladooda raadinta ay caymis ugu jiraan ilaa $ 1000.
Ku isticmaal sameecadaha dhageysiga ee aad jeceshahay qalabkaaga ciyaarta adigoo ku mahadsan kuwan adapters UGREEN ah
Adoo adeegsadayaashan waxaad ku isticmaali kartaa AirPod-yadaada si aad ugu ciyaarto Nintendo Switch, ama wixii sameecado kale ah oo Bluetooth ah.
PUBG waxay goysaa xiriirkeeda Tencent si ay ugu soo noqoto suuqa Hindiya
PUBG Corporation waxaa lagu qasbay inay joojiso ku tiirsanaanta Tencent ee horumarinta nuucyadeeda moobaylka haddii ay rabto inay ka sii socoto Hindiya
Apple waxay horey u sameysay labo waji oo midkood hufan yahay
Riyada adeegsadayaal badan ayaa rumoobi kara mustaqbalka fog, maxaa yeelay Apple horay ayey u qorsheysay labo ...
U diyaargarowga muxaadarada bisha Sebtember 15 adoo wata sawir-gacmeedyadan
Waraaqaha dariiqa ee iPhone-kaaga oo ay ku qoran tahay astaanta Apple ee cinwaanka ugu weyn ee Sebtember 15 ayaa hadda la heli karaa
Wax soosaarka tirada badan ee iPhone 12 ayaa bilaabmaya AirTag-na durba waa ay socotaa
Wax soosaarka tirada badan ee iPhone 12 ayaa bilaabmaya AirTag-na durba waa ay socotaa. Soosaarida 12-inji iPhone 6,1 ayaa dhaqso u bilaaban doonta.
Apple wuxuu shaqaalaysiiyaa xubin ka tirsan kooxda Apple TV Tim Connolly
Adeegyada qulqulka maqalka ee maqalku waxay umuuqdaan kuwo sare usii kacaya, iyo Apple, oo si sax ah loogu matalay dhamaanba ...
LiDAR iyo Mac Pro gawaarida khariidadaha ku leh Khariidadaha Apple
Gawaarida Khariidadaha Apple waxay adeegsadaan LiDAR, iPad iyo Mac Pro si ay u soo qabtaan dhammaan xogta lagama maarmaanka u ah shirkadda lafteeda.
Apple ayaa ka digtay sirta dadka ee fiidiyowga qosolka leh
Apple ayaa ka digtay sirta dadka muuqaal fiidiyoow ah. Waxay muujineysaa waxa ay tahay inaadan sameyn si aad ugu xad gudubto arimahaaga gaarka ah.
Apple waxay u dhisaysaa labo ka mid ah marawaxadaha dabaysha ugu waawayn aduunka ee ay u adeegsan doonaan server-keeda Denmark
Apple waxay u dhisi doontaa laba ka mid ah marawaxadaha dabaysha ugu waaweyn adduunka adeegeyaasheeda Danmark. Waxay yeelan doonaan 200 m. Dheer
Hindiya sidoo kale waxay xannibtaa PUBG sidii ay ugu samaysay TikTok
Dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyay ee Hindiya wuxuu ahaa inuu xannibo codsiyo badan, markan laga bilaabo Tencent, sida guusha ciyaarta fiidiyowga ee PUBG Mobile.
LiDAR-ka iPhone 12 Pro waxaa lagu xaqiijiyay daadintaan
Sawirro faahfaahsan oo ku saabsan muraayadda dhabarka dambe ee iPhone 12 Pro waxay caddeynaysaa in qalabka uu yeelan doono ugu yaraan hal dareeraha LiDAR
Ubadal isticmaaleha tooska ah Apple TV-gaaga mahadnaqa Tilmaamaha ee tvOS 14
IPADOSOS iyo iOS 14 betas ayaa kuu oggolaanaya inaad bedesho, mahadnaqa barnaamijka Tilmaamaha, koontada isticmaalaha ee TV-ga Apple TV oo leh tvOS 14.
Xukunka AirPods wuxuu umuuqdaa mid uumi baxaya
Suuqa headphones-ka wireless-ka ayaa kor u kacaya oo Apple's AirPods waxay umuuqdaan inay lumiyeen xoogaa oomph ah
Sida Loo Wadaago Dhacdada Kalandarka iCloud ee iPhone, iPad, iyo iPod taabashada
Waxaan ku tusineynaa sida ay u fududahay inaad la wadaagto dhacdo taariikheed iCloud dad kale oo ka socda iPhone, iPad ama iPod Touch
Tilmaamaha Mataanaha, raaxada iyo midabka leh ismaamul heer sare ah
Waxaan ka tijaabinay dhagaha dhagaha ee mataanaha 'Fresh'n Rebel' ismaamul aad u fiican, iska caabin biyo iyo midabbo dhowr ah oo la heli karo.
Nomad horeyba waxay u leedahay Saldhigga Saldhigga cusub ee horay loo sii dalbaday
Nomad wuxuu si rasmi ah ugu dhawaaqayaa Saldhigga Saldhigga Bixinta ee Saldhigga oo leh Ikhtiyaarro Bixin Bilaash ah oo illaa Saddex Qalabka ah isla mar ahaantaana
AppleCare + muddada iibsiga waa la kordhiyay
Apple wuxuu ku darayaa hal sano kadib markii uu qalab ugu iibsaday AppleCare + caymiska
Apple waxay ka caawisay dowladda Mareykanka sameynta “Ipadka Sirta ah” iPod
Apple waxay ka caawisay dowladda Mareykanka sameynta “Ipadka Sirta ah” iPod. iPod la beddelay oo ku qaadi doona faylasha qarsoon ee ku jira darawalkiisa adag.
Beta-shanaad ee iOS 14 ayaa hadda loo heli karaa iPhone-ka, sidoo kale beta-ka shanaad ee u dhigma iPadOS 14.
U diyaar garowga Xadiiqadaha Qaranka ee Loogu Talo Galay Ogosto 30
Apple waxay horeyba u heysatay loolan cusub oo diyaar u ah bishaan Ogosto taasna waxay diiradda saaraysaa jardiinooyinka qaranka. La heli karo bisha soo socota ee Ogosto 30
Maxay Epic u sameyn weyday Xbox, PlayStation, iyo Nintendo?
Epic wuxuu bilaabay dagaal ka dhan ah Apple iyo Google. Maxaa ka dhacaya adduunka qalabka fiidiyowga? Epic miyuu iyaga la jiri doonaa?
Epic wuxuu dajiyaa qorshe qumman Apple-na si lama huraan ah ayey ugu dhacdaa dabintooda
Fornite ayaa laga saaray App Store dhaqdhaqaaq Epic uu sababay oo doonaya inuu Apple ka dhigo ninka xun ee filimka
Apple ayaa bilaabi doonta xirmooyin xirmo adeeg ah oo loo yaqaan "Apple One"
Apple ayaa bilaabi doonta xirmooyin xirmo adeeg ah oo loo yaqaan "Apple One". Waxaa jiri doona dhowr xirmo adeeg oo leh qiime kala duwan, sida kuwa aan caadaysannay inaan ku aragno taleefannada, internetka iyo shirkadaha TV-yada.
Tuuryo aad Apple TV in aadan joojin karin haysashada
Waxaan ku tusineynaa sida aad uga faa iideysan karto Apple TV-gaaga iyo HomeKit adigoo u mahadcelinaya barnaamijka Gawaarida ee iOS 14 iyo WatchOS 7.
Maxaan samayn karnaa haddii aan ku haysanno batteriga bararsan iPhone-keena? Maanta waxaan la wadaagayaa wixii aan shaqsiyan qabtay
Asturnaanta, ogeysiisyada caqliga badan, iyo taageerada buuxda ee HomeKit Secure Video ee kamarad sifiican loo dhammeeyay, oo tayo sare leh.
Sida loola wadaago qoraalka ogeysiiska barnaamijka ka yimid iOS ama iPadOS
Waxaan ku baraynaa inaad si dhakhso leh ula wadaagto qoraalada barnaamijka iOS iyo iPadOS Notes, iyo sidoo kale inaad barato sida wax looga beddelo rukhsaddahooda.
Sida loo rakibo daawadayaasha 7 XNUMX beta
Haddii aad horeyba u tijaabineysay macruufka 14, oo aad rabto inaad kugu dhiirrigeliso inaad rakibto beta-ka ugu horreeya ee dadweynaha ee watchOS 7, qodobkan waxaan ku tusaynaa tallaabooyinka la raaco
Sida looga saaro tabka Kulan ee barnaamijka Gmail
Haddii aadan isticmaalin Google Meet oo aad rabto inaad ka takhalusto taabashada Gmail Meet, qodobkaan waxaan ku tusaynaa sida aad uga saari karto.
Kuo wuxuu yareeyaa filashooyinka dhoofinta ee iPhone illaa 30% sababtoo ah ka saarista WeChat
Rajada laga qabo shixnadaha iPhone-ka ayaa si daran u saameyn doonta haddii mamnuucista ku rakibidda WeChat ee iPhone la fuliyo
Sida loo kiciyo aqoonsiga codka ee iOS iyo iPadOS 14
IOS iyo iPadOS 14 waxaa ku jira aqoonsi dhawaq ah oo ah muuqaalka marin u helida cusub. Waxaan ku tusineynaa sida loo kiciyo oo si sax ah loogu hagaajiyo.
Sida loogu daro Profiles-ka barnaamijka Amazon Prime Video App
Abuuritaanka muuqaallo ku saabsan Amazon Prime Video waa nidaam aad u fudud oo kuu oggolaanaya inaad kala soocdo waxyaabaha uu xubin kasta oo qoyska ka mid ahi daawado.
Si dhakhso leh oo qiimo jaban loogu qaado fiilooyinkan iyo xeedho ka socda UGREEN
UGREEN waxay na siisaa xeedho lagama maarmaan ah iyo fiilooyin si dhaqso ah ugu soo dallacno qalabkeenna qiimo aad u jaban
Meeleynta magnets ee iPhone 12 waxay sare u qaadeysaa rajooyinka
Daadinta waxa u muuqda dhabarka iPhone 12 oo leh dhowr magnets oo lagu dhejiyay qaab wareeg ah waxay soo jeedinaysaa dhowr horumar
Tani waa Reels, jawaabta Instagram ee TikTok
Hadda Instagram (oo uu leeyahay Facebook) ayaa TikTok tooshka ku ifiyey oo bilaabay Reels, miyaan aragnaa bilowga dhamaadka TikTok?
Rampow xirayaasha baahiyaha oo dhan
Seddex xeedho oo leh dekedo kala duwan iyo awoodo awood leh oo leh cabir ku habboon iyo waxqabad si ay u qaataan meel kasta iyo qiimo aad u fiican.
Apple wuxuu sii daayaa macruufka 14 Beta 4 ee loogu talagalay Soo-saareyaasha
Apple waxay sii deysay macruufka 'iOS 14 Beta 4' oo loogu talagalay soo-saareyaasha waxaana hadda loo heli karaa cusbooneysiinta Hawada ee dhammaan adeegsadayaasha rakibay.
Khadadka wax soo saarka iPhone ee gaarka ah ee suuqa Shiinaha
Sida laga soo xigtay DigiTimes, Apple waxay raadin lahayd hab lagu soo saaro iphone-ka Shiinaha si ay u sii joogaan Shiinaha
Sidee looga warbixiyaa cillad ku jirta IOS ama iPadOS 14
Waxaan ku baraynaa inaad soo sheegto khaladaadka ku jira iOS iyo iPadOS 14 betas mahadnaqida Codsiga Kaaliyaha Jawaab celinta ee lagu rakibay aaladahayaga.
Spotify wuxuu u koraa 299 milyan oo isticmaale firfircoon
Ka dib markii hoos u dhacday isticmaalka muusikada qulqulka leh cudurka faafa ee 'Coronavirus', Spotify ayaa mar labaad u koraysa 299 milyan oo isticmaale firfircoon.
9 macruufka 14 khiyaamo ah oo laga yaabo inaadan aqoon [Muuqaal]
Waxaan sii wadeynaa inaan si adag uga shaqeyno macruufka 14 iyo dhamaan wararka ku saabsan wajiga beta si aad si qoto dheer u ogaan karto ...
Amniga xagaaga: Reolink Argus PT iyo E1 Pro
Reolink ARgus PT iyo E1 Pro, oo ah laba nooc oo kaladuwan, laga bilaabo ilaalin ballaaran ilaa heerka aasaasiga ah ee soo-gelitaanka, ku ogaada dib-u-eegistaan.
Qualcomm ayaa ka digtay saacado ka hor inta aan si rasmi ah loo xaqiijin
Sarkaal sare oo ka tirsan shirkadda Qualcomm ayaa ku soo baxay wareysi uu siiyay Reuters isagoo sharraxaya in Chips-ka loo yaqaan '5G' ay leeyihiin dhibaatooyin xagga saadka ah.
IPhone SE wuxuu ku hogaamiyaa Apple inay jabiso rikoorkeeda markale
Apple waxay ku dhawaaqday xogteeda maaliyadeed rubac seddexaad ee 2020, oo ah tan ugu badan ee uu saameeyay faafa sababtoo ah ...
Netro Pixie, xakamaynta waraabka caqliga badan
Waxaan tijaabinay kantaroolaha waraabka Netro Pixie kaas oo isku daraya ismaamul buuxa iyadoo ay ugu wacan tahay dib u soo celinta qoraxda oo leh nidaam waraabineed oo caqli gaar ah.
Sida loo dhagaysto heesaha Youtube-ka iyadoo shaashadda iPhone-ka ay ka maqan tahay
Ka dhageyso muusikada YouTube-ka asalka iyada oo leh iPhone ama iPad. Khiyaano yar oo aan shaashadda la hawl gelin
IOS 14 waxay hagaajisaa cilad weyn oo kumbuyuutar ah
Isticmaalayaasha IOS way ogyihiin in kumbuyuutarka uusan si sax ah uga mid ahayn qodobada adag marka la eego ...
Muuqaalkii ugu horreeyay ee xilli-ciyaareedkii labaad ee Dhammaan Aadanaha ayaa hadda la heli karaa
Apple ayaa ku soo daabacday kanaalkeeda YouTube filimkii ugu horreeyay ee xilli ciyaareedkii labaad ee taxanaha Dadka oo dhan
Aqoonsiga Face-ka ee iPhone-ka ayaa gaari kara Mac-yada
Apple waxay kudareysaa macOS 'Big Sur code' tilmaam ku saabsan imaatinka Aqoonsiga Face-ka ee Mac-yada. Way ku dhowaan kartaa imaanshihiisa
Nala garo Sawirka Sawirka (PiP) shaqeynta cusub ee kuugu imaaneysa iPhone-kaaga taas oo kuu oggolaan doonta inaad sii wado daawashada fiidiyowyadaada adigoon joojin.
Sida loo xannibo gelitaanka Facebook Messenger adoo adeegsanaya Face ID ama Touch ID
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyo barnaamijka Facebook Messenger, waxaan ugu dambeyn ku ilaalin karnaa wada hadalkeenna Face ID ama Touch ID.
Apple wuxuu bilaabayaa jiilka cusub ee AirPods iyo AirPods Pro sanadka 2021
Jiilka soo socda ee AirPods, oo ay ku jiraan AirPods Pro, kuma dhufan doono suuqa illaa bartamaha 2021 ugu horreyn.
IPhone-ka cusub ee cusub ee loo yaqaan 'iPhone 12' wuxuu keeni karaa horumar xagga autofocuska ah, waxaanuna yeelan doonnaa lensis periscope ah sannadka 2022
Saxafiga caanka ah ee warka xanta ah ee Min-Chi Kuo ayaa saadaaliyay in taleefanka iPhone 12 uu horumarin doono autofocus, sanadka 2022-na waxaan arki doonaa muraayadaha indhaha ee loo yaqaan 'periscope lenses'.
Jagada iyo tilmaamidda tilmaamaha sameecadaha dhagaha ee Apple
Fasax gaar ah oo si toos ah ula xiriiri kara Studio-ka cusub ee AirPods ayaa muujinaya booska iyo tilmaamidda tilmaanta
Logitech K380 iyo Pebble, kiiboodh iyo jiir dhammaan aaladahaaga
Waxaan tijaabinay Logiteach K380 iyo Pebble couple, oo ah kumbuyuutar aalado kala duwan leh iyo jiir aad had iyo jeer ku qaadan karto adiga iyo is-maamul madax-bannaan.
Aqoonsiga Face-ka ayaa khariidayn kara xididdada isticmaala mustaqbalka si looga fogaado jahwareerka u dhexeeya mataanaha
Aqoonsiga Face-ka ayaa khariidayn kara xididdada isticmaala mustaqbalka si looga fogaado jahwareerka u dhexeeya mataanaha. Haddii Aqoonsiga Aqoonsiga (Face ID) uu mar horeba sugan yahay, way ka sii fiicnaan lahayd.
Sida otomaatiga ah Loogu Dhaqaaqo Ha Udegin Habka Marka Aad Gaadhiga Waddo
Waxaan ku tusineynaa sida aad si fudud ugu dhaqaajin karto ikhtiyaarka ah inaadan carqaladeynin baabuur wadista si otomaatig ah markaad ka dambeyso giraangirta
Sameecadaha dhagaha ee mataanaha cusub ee Fresh'n Rebel hada waxaa lagu iibinayaa Fnac
Fresh 'n Rebel waxay soo saartay dhagaha dhagaha mataanaha iyo mataanaha' Pro ', Dhagaha dhagaha runta ah ee suuqyada ku dhaca ...
Ajax, amniga wireless iyo cabirkaaga
Waxaan tijaabinay nidaamka amniga ee Ajax, kaas oo u oggolaanaya qaab shaqsiyeed, qaabeyn qaabeed iyada oo aan laga qaadin khidmadaha bil kasta nooc kasta
Sidee looga saaraa xiriirada la soo jeediyey marka la wadaagayo waxyaabaha ku jira iOS 14
IOS 14 waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka saarto xiriirada la soo jeediyay Siri markaad la wadaagayso nooc kasta oo ka mid ah waxyaabaha ku saabsan nidaamka deegaanka ee Apple.
Apple wuxuu ku shaqeeyaa kiiska batteriga isagoon lahayn Hillaac
Apple wali waa la go'aamiyaa iyadoo la raacayo dhammaan wararka xanta ah si ay u bilaabaan iphone iyada oo aan lahayn iskuxiraha danabka muddada dhexe, taas oo ay u shaqeyneyso hadda
Apple TV + wuxuu ku dhawaaqay 'Palmer,' filin cusub oo uu jilayo Justin Timberlake
Apple TV + wuxuu ku dhawaaqayaa laba filim oo cusub oo ku saabsan buugeeda: Palmer, filim uu jilayo Justin Timberlake; iyo Echo 3, oo ah taxane male-awaal ah.
Ka gudub Dib u eegista ESD250C SSD: Xawaaraha ugu badan, Naqshadeynta, iyo Awoodda
Suurtagalnimada in lagu daro kaydinta bannaanka ee ipadkeena tan iyo markii ay Apple bilawday iPad Pro-ka USB-C ma furmayo ...
Sida loo hubiyo heerka dB ee iOS 14 waqtiga dhabta ah
IOS 14, Apple waxay soo saartay hawl cusub oo noo ogolaaneysa inaan ku ogaanno waqtiga dhabta ah haddii mugga samaacadahayagu ay waxyeello u yeelan karaan caafimaadkeena.
Apple Watch oo jaban batari dartiis, xirmada bedelka Amazon, iyo loolan shaqsiyeed: bedel batteriga naftayda.
Brydge waxay horey u haysataa kumbuyuutarradeeda iPad-ka ee Isbaanishka ee ku yaal Apple Store
Kumbuyuutarka jidhku wuxuu u noqonayaa mid si aad ah looga maarmi karo u ah iPad-ka, iyo mid ka mid ah ...
Apple wali waxay baareysay sida loo hormariyo router-yaasheeda wax yar ka hor intaysan ka tagin
Ka tagitaankii dariiqa Apple ayaa dad badan la yaab ku noqotay. Saldhigyada AirPort ee moodooyinkooda kaladuwan waxay ahaayeen ...